ဂျော့ဘ် VACANCY အကြံဉာဏ်ကိုယူအေအီးအတွက်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနှင့်အတူ Emirates 🥇
Emirates Jobs ယူအေအီးတွင်အလုပ်ရှာပြီးအလုပ်ရှာပါ
ဇန်နဝါရီလ 17, 2018
အရှေ့အလယ်ပိုင်း VACANCY နှင့်မည်သို့သူတို့ကိုရှာဖွေရန်?
Emirates Jobs အတွက် Expatriate တွေအတွက်ငါတို့အားလုံးသူတို့သိပြီးငါတို့အားလုံးလိုချင်တယ်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူအချို့မသိသောတစ်ခုတည်းသောအရာက၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာရမည်နည်း။ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများ များမှာ လိုလိုလားလားနယ်ပယ်များတွင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကိုယူပြီး။ ဥပမာအားဖြင့်, ဖိလစျအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူယူအေအီးအတွက်အလုပ်လုပ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အိန္ဒိယလုပ်သားများကိုအောင်မြင်စွာစော်ဘွားဂျော့ဘ်များအတွက်အင်တာဗျူးများဖြတ်သန်း။ တောင်အာဖရိကကျွမ်းကျင်သူများလည်းယူအေအီးအတွက်အလုပ်လုပ်ကိုချစ်။ စော်ဘွားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်ပါသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်အကောင်းဆုံးစာချုပ်.
ဒီအခြေအနေအရ, သင်တစ်ဦးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးလျှင်။ တခြားသူတွေနဲ့ရှေ့ဆက်သွားနှင့်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေပါ။ ၏သင်တန်း, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလျှောက်လွှာအချို့ကိုခက်ခဲတဲ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်ပါသည် အောင်မြင်စွာအလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်းစေရန်။ အိပ်မက်နှင့်ရူပါရုံကိုအတူတစ်ဦးကလူတစ်ဦး။ တကယ်တော့နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်ကြီးမားသောဘတ်ဂျက်ထက်ပိုမိုအစွမ်းထက်သည်။ ပင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။
အလုပ်အကိုင်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကြင်နာဒူဘိုင်းအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအချိန်အလုပ်အကိုင်များဖြစ်ပါတယ်။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအချိန် အလုပ်အကိုင်အသင့်ရဲ့လစာမှဝင်ငွေသို့မဟုတ်ထို့အပြင်၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်တစ်နေ့တာအလုပ်အကိုင်များအတွက်အချိန်ပိုနာရီဆိုတော့အတော်လေးခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်တတ်နိုင် တစ်ဦး storekeeper သို့မဟုတ်အရောင်းလက်ထောက်အဖြစ်အလုပ်ရှာတွေ့။ ထိုအသင်ပိုမိုငွေရှာနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျကောငျးမှနျစှာကစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်သင်တို့သည်အားကြီးသောဒေသခံသုတေသနပြုလျှင်စော်ဘွားအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေအတော်လေးလွယ်ကူပါတယ်။
အခြိနျပိုငျးဝင်ငွေအရာများစွာကိုအတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။ ဥပမာအားဖြင့်, အချို့ကိုသင်ပိုက်ဆံကယ်တင်နှင့်ယူအေအီးရှိငှားအနာဂတ်အတွက်သုံးစွဲအတွက်နိုငျသညျ။ ဝင်ငွေမျိုးရရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတိုက်ရိုက်လျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ဤကိစ္စတွင်အတွက်, သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင် get နှင့်သင့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita နှင့်အတူလမ်းလျှောက်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဒူဘိုင်းဒေသခံအရက်ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များတွင်စကားပြော။ အမြဲတမ်းတစ်လုပ်သားအင်အားရှာဖွေနေ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်သည်သင်၏စိတ်ကိုအတင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နဲ့ ထွက်. CV ကိုထွက်လက်။
သေချာအခြိနျပိုငျးအလုပ်အကိုင်များအဘို့သင့်ဘတ်ဂျက်ပြုပြင်ဖြင့်သင်တို့ကိုတက်ကူညီဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကျနော်တို့အလေးအနက်ထားအပိုဝင်ငွေကိုရှာဖွေရန်သင့်အားအကြံပြုပါသည်။ ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်သေချာဘို့, သင်သည်သင်၏စေရန်လိုအပ် Arabic အဘိဓါန်အိပ်မက်လူနေမှုပုံစံစတဲ့။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အမြန်အလုပ်အကိုင်များများအတွက်အကောင်းဆုံးသောအရပ်တို့ကိုအလုပ်ရှာဖွေသည့်ကုမ္ပဏီများဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူကြည့်ကြ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အဘုတ်အဖွဲ့ကုမ္ပဏီ နှင့် စုဆောင်းမှုအေးဂျင့်က်ဘ်ဆိုက်။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
စော်ဘွားအလုပ်အကိုင်များအတွက်ကြောင့်အခြားလမ်းဧညျ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းထားရန်။ အလုပ်အကိုင်အဒီ type ကိုအဓိကအားဖြစ်ပါသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများပြည်တော်ပြန်များအတွက်လုပ်အရင်းအမြစ်။ ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်များကိုအနည်းငယ်ကောင်းသောအချက်များရှိသည်။ ဟိုတယ် 10 ဌာနများကျော်ရှိသည်။ ရေရှည်မှာ, သင်ကမီးဖိုချောင်အထမ်းသမားအဖြစ်စတင်နိုင်ပါသည်နှင့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမီးဖိုချောင်စားဖိုမှူးမှရာထူးတိုးခံရ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ဧညျ့ကွိုအဖြစ်စတင်နိုင်ပါသည်နှင့် ယေဘုယျအားစီမံခန့်ခွဲမှုအထိသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူကြီးပြင်းလာ.
အထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်းတွင်, သုံးသငျသညျလူတနျးစားစော်ဘွားဂျော့အတွက်အကောင်းဆုံးကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာဤမျှလောက်များစွာသောဟိုတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယူအေအီး၌သင်တို့ကိုအလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထိုကိုအောက်မေ့ရမည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အ7စော်ဘွားအတွက်လက်ရှိမြို့တမြို့သို့မသာ။ အဘူဒါဘီန်ထမ်းတစ်ဦးကယ့်ကိုအကောင်းသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။ အဘူဒါဘီအတွက်ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေနည်းပါးလာအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေနေသူ။ အပြုသဘောဘက်တွင်, သငျသညျအိပျမကျမှေးဝမျးကြောငျးအဘို့အမဲအတွက်စမတ်ဖြစ်သင့်သည်။ နှင့်အခြား7စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကိုရှေးခယျြဥပမာအားဖြင့်, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှုရှိပါတယ် အဘူဒါဘီ၏ဆင်ခြေဖုံး။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသေးငယ်တဲ့ကားတစ်စီးကိုဝယ်ယူရန်နှင့်ဟိုတယ်ကိုမောင်းသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, စော်ဘွားတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် 7star ဟိုတယ်များအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်မြှင့်တင်ခံရအံ့ဩမိန်းမောပါပဲ။ နှင့် အိပ်မက်၏မြို့အတွက်အရာအားလုံးဖြစ်နိုင်။ အရှုံးမပေးနှင့်အလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်းထုတ်ပေးပို့ဘယ်တော့မှမ။ သင်လက်ရှိသည်အခြားဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများအတွက်အလုပ်လုပ်နေကြရင်တောင်။
ယူအေအီးအတွက်ရွေးချယ်ဖို့နောက်ထပ်အံ့သြ posh အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ CITY မှလာမယ့်မရေမတွက်နိုင်သောရော့ခ်ကြယ်နဲ့ရုပ်ရှင်ကြယ်ပွ။ မဖြစ်နိုင်တာမစ်ရှင်ကနေဥပမာအားဖြင့်, အိုတိုမီခရုဇ် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုလည်ပတ်ခဲ့။ ဒီစီမံကိန်းတွေလက်အောက်တွင်, သင်သက်တော်စောင့်အဖြစ်စတင်နိုင်ပါသည်။ အဲဒါကို Next ကိုအဆငျ့ VIP စီးပွားရေးသမားများအတွက်ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးသည်။ သို့မဟုတ်ပင် လူအင်အားအေဂျင်စီများမှချိတ်ဆက်ရ ရိုးရှင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုသည်။ ယူအေအီးအတွက်အာမခံရှာနေရေရှည်မှာစျေးဝယ်ကုန်တိုက်၌တည်၏။ bouncers ရှာဖွေနေဒေသခံအရက်ဆိုင်။ CCTV ကင်မရာစစ်ဆင်ရေးအလုပ်အကိုင်များလတ်ဆတ်တဲ့ဘွဲ့ရအမဲပြည်ပရှိအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ကောင်းသောဖြစ်ကြသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ယူအေအီးအတွက်လုံခြုံရေးအစောင့်စကားပြော။ ခိုင်မာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ multi-တာဝန်နှင့်အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အလုပ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ လုံခြုံရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း တင်းကျပ်ဘာလဲဆိုတော့အချိန်ပါဝငျသညျ။ တစ်ခုချင်းစီကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းအလယျပိုငျးအရှေ့အတွေ့အကြုံကိုဤကိစ္စတွင်အတွက်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခိုင်မာတဲ့စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ညှိနှိုင်းရေးမှူးကျွမ်းကျင်မှုတန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ပါသည် အသက်ကြီးမှုရာထူးများအတွက်။ အာမခံ၏ဒါရိုက်တာကိုအောကျမေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ High-အန္တရာယ်စစ်ဆင်ရေးလုပ်ဆောင်ရန်သင့်အားပေးပို့နိုင်ပါစေ။ လုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်လည်းမြင့်မားတဲ့စွန့်စားမှုလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဒေသများခံစားခဲ့ရနိုင်ပါသည်။
နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်တွင်, သင်လုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှုအခန်းထဲမှာစစ်ဆေးထွက်ပေးပို့အကြောင်းကြားနိုင်ပါကြောင်း အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် Loading နှင့်ကင်းလှည့်ခြင်းနှင့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ဒါ့အပြင်နောက်ကျောအိမ်မှ VIP ယာဉ်ရပ်နားစစ်ဆေးခြင်းကိုအတူ။ အပြုသဘောဘက်တွင်, လုံခြုံရေးလယ်ကွင်းဒူဘိုင်းအတွက်ခိုင်မာတဲ့လုပ်ခရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အမြင့်ဆုံးစွန့်စားမှုလည်ပတ်မှုဧရိယာထဲမှာ။
စော်ဘွားအလုပ်စျေးကွက်များတွင်ဤမျှလောက်များစွာသောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေ ယာဉ်မောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်။ ဒါဟာသင်ပုဂ္ဂလိကယာဉ်မောင်းအဖြစ်အလုပ်လုပ်နေစတင်နိုင်ပါသည်လွယ်ကူပါတယ်။ ဥပမာအား Uber ထိုကဲ့သို့သောအသုံးအနှုန်းများတွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တက္ကစီဒရိုင်ဘာအလုပ်အကိုင်များတွင်လည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်သင်သည်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းခံရဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ရဖို့အတော်လေးရှည်လျားဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒူဘိုင်းအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလုပ်အကိုင်များကြောင့်အများကြီးလူကြိုက်များစော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌နေကြသည်မဟုတ်။ ဒူဘိုင်းအတွက်ကြောင့်, သင်ကြီးမားကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူကောင်းစွာ-paid အလုပ်အကိုင်များရှာတှေ့နိုငျ။ သငျသညျ dubizzle သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနေရာလွတ်နှင့် ပတ်သက်. အလုပ် post ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဆိုတာကိုသတိရသင့်တယ်။ ကားမောင်း Limousines လျောက်ပတ်သောလုပ်ခလစာစေရန်ကောင်းမွန်သောအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သင်ပင်တတ်နိုင်သမျှ အလုပ်အကိုင်အကမ်းလှမ်းမှုကို get အလင်းအိမ်ဗန်မောင်းနှင်သည်။ ကြောင်းမောင်းနှင်မှုအပေါ် အခြေခံ. သင်ကားမောင်းလိုင်စင်များကိုစွဲလမ်းလျှင်တစ်ဦးအပျြောအပါးပါပဲ။
အချက်အလက်များဖိလစ်ပိုင်နှင့်အိန္ဒိယအတွေ့အကြုံကိုပြည်တော်ပြန်တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်။ နိုင် Uber အတွက်ကုမ္ပဏီကားမောင်းသူအနေအထားလျှောက်ထား။ ကမ်းလှမ်းမှုကိုဒီလိုယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေတာ၏အရှိဆုံးလွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးရာထူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ get ရန်သင့်အားအကြံပေး။ ပုဂ္ဂလိကယာဉ်မောင်းရူ့ဖြစ်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းမြို့ရှိ HR အလုပ် Get ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်နောက်ထပ် key ကိုအမှတ်စုဆောင်းမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနိုင်ပါတယ်။ HR စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များအတွက် အရှေ့အလယ်ပိုင်းအံ့သြကြိုဆိုနေသည်။ ထိုကဲ့သို့သော HR မန်နေဂျာအဖြစ်စော်ဘွားအလုပ်အကိုင်များရှည်လျားနာရီနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပါဝငျသညျ။ အကြီးတန်းအရာရှိတစ်ဦးအဖြစ်ဖိအားအောက်မှာအလုပ်လုပ်ဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောဟိုတယ်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီများမှ MBA ဘွဲ့ရနှင့်အတူလတ်ဆတ်တဲ့ဘွဲ့ရကူညီပေးနေ ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်း HR Junior ရာထူးမှရာထူးတိုးခံရဖို့။
စော်ဘွားအထဲတွင်န်ထမ်းခေါ်ယူမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ကုမ္ပဏီအတွင်းပိုင်း HR ဌာနရ သငျသညျခိုငျမာလုပ်ဆောင်ရန်အစီအစဉ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအလုပ်ရှင်စုဆောင်းမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း, သင်ရလိမ့်မယ်။ သို့ လမ်းညွှန်ကျော်စုဆောင်းမှုအတွက်အလုပ်အကိုင်အလာပြီ ဥပမာအားကုမ္ပဏီ။ သငျသညျအတှေ့အကွုံနိမ့်ဆုံး3နှစ်ပေါင်းရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ HR စီမံခန့်ခွဲမှုလူအင်အားလုပ်သားအင်အားရောက်ရန်အစီအစဉ်တစ်ခုထုတ်ပေးပါတယ်။ လည်းအချိန်မီအမူအကျင့်အတွက်တောင်းဆိုထားတဲ့နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, သင်ဒီဂရီလိုအပ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ကျနော်တို့ HR အလုပ်အကိုင်များဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်တည်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းသင်သည်အကြံပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူနေမှုတိုး၏ကုန်ကျစရိတ် မိခင်ကုမ္ပဏီနှိုင်းယှဉ်။ သို့သော်အပြုသဘောဘက်ပေါ်တွင်သင်၏လုပ်အားခစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအဆင့်မြင့်ဖြစ်လာသည်။ သငျသညျပြုပြင်-class ကိုသူရဲကောင်းလျှင် HR အရာရှိများကဲ့သို့သင်တို့ $ 3k အထိတစ်လ $ 5k ကျော်ဝင်ငွေရနိုငျသညျ။
ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားစေရန်, ယူအေအီးအခြားအလုပ်ရှာဖွေသူများနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်တိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူ။ ဤအကြောင်းကြောင့်, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများအား CV ကိုပေးပို့ခြင်း။ အပြုသဘောဘက်တွင်, တူညီတဲ့အခွအေနအသီးအသီးအသစ်ကကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဘို့ဖြစ်၏။ ဒါကြောင့်သင်ကဗီဇာရှိသည်နှင့်သင်ဘာလုပ်သင့်တယ် ?. အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရိုးရှင်းစွာယူအေအီးအတွက်စုဆောင်းမှုမန်နေဂျာ hit ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးဗီဇာရှိပါက အလုပ်အကိုင်စျေးကွက် သင်တို့အဘို့အပွင့်လင်းဖြစ်လာသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, သင်ဒေသခံတစ်ဦးကစျေးကွက်နှင့်အတူအလုပ်ရှင်များနှင့်ရှာဖွေစုဆောင်း hit သငျ့သညျ။
ဗီဇာအလုပ်အကိုင်များအလုပ်ရှာနေသူလူတိုင်းအတွက်ပေးထားကြသည်။ အဆိုးဆုံးဖြစ်ပါတယ် သင့်ရဲ့ဗီဇာအတော်လေးမကြာမီသက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့်အခါ။ အလုပ်ရှာရန်အပူတပြင်းဖြစ်မနေပါနဲ့။ သို့သော်သင်လိုအပ် အလုပ်ရှာဖွေအတွက်စမတ်ဖြစ်။ ကြောင်းကိုဖြစ်ပျက် Make နှင့် get အစာရှောင်ခြင်းအလုပ်အိပ်မက်မက်။ ရိုးရှင်းစွာအသင်တစ်ဦးဗီဇာရှိသည်နှင့်သင်ဒူဘိုင်းအချိန်အတွက်အခါစီးဆင်းနေသည်။ အချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးပို့ခြင်းနှင့်အတူလိုက်စောင့်ရှောက်ကြပါဘူး။
ဗီဇာနှင့်အတူဒူဘိုင်းတိုင်းလူတစ်ဦးတစ်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအစာရှောငျအလုပ်တစ်ခုရနိုင်နှင့်သင်အနာဂတ်အလုပ်ရှင်နှင့်အတူဒုက္ခမရှိကြပါဘူး။ သင်လုပ်နိုင်သည် အလုပ်ရှာဖွေသူများဘို့ငါတို့လမ်းညွှန်နှင့်အတူချက်ချင်းတစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်။ သင့်အလုပ်ရှင်မှမေးသောမေးခွန်းများ မှလွဲ၍ ကျန်ဖြေကြားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဘဏ်အကောင့်နှင့်ဖြည့်စွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလျှောက်လွှာ။ အကယ်၍ သင့်တွင်ဒူဘိုင်း၌အလုပ်လုပ်ခွင့်ဗီဇာရှိပါကသင်လိုအပ်သည်။
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကိုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူ, သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ် အခုအချိန်မှာငှားရမ်းနေသောကုမ္ပဏီများသည်အပေါ်နက်ရှိုင်းသောသုတေသန။ Excellent ကဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ တဦးတည်းအရာ, ကျိန်းသေဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ကောင်းသောအသိပညာများအတွက် သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်သစ်ဆင်းသက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင်တန်း၏, အတွေ့အကြုံကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအချိန်ကျော် preference ကိုပေးလိမ့်မည်။
အဆိုပါထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအရာရှိတစ်ဦးအဖြစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီများသည်၏အခန်းကဏ္ဍကိုအဓိကအား site ကိုအသင်းများနှင့် Logistic ကိစ္စရပ်များညှိနှိုင်းနေပါတယ်။ co-operated ထံမှပစ္စည်းအလို့ငှာစုဆောင်းဖို့အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူ ဒူဘိုင်းမြို့ရှိကုမ္ပဏီများ နှင့်နိုင်ငံတကာပေးသွင်းဖို့အမိန့်အားမရ။
တူညီသောလက္ခဏာသက်သေအားဖြင့် ပင်လယ်ကွေ့နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကို ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီဌာနများအတွင်းဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်စုဆောင်းခြင်းစီစဉ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင့်အနေအထားကားမောင်းသူရဲ့တာဝန်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းပါဝငျသညျ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, အခြားသူများထံမှအမိန့်များနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်နမူနာ၏စုဆောင်းမှု၏အသစ်အအရင်းအမြစ်စီစဉ်အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤစကားမှန်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီများမှ။ သာသက်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ 2-3 နှစ်ပေါင်းအတူအလုပ်ရှာဖွေသူများငှားရမ်းဒီတော့သင်နှင့်အတူကောင်းသောအသေးစိတျရှိသေချာပါစေ။ စော်ဘွားအတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း၏အသိပညာကိုအောကျမေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ နှင့်တရားဝင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကားမောင်းလိုင်စင်တစ်ခုရှိရမည်ဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်အသစ်ငှားရမ်းထားလူတစ်ဦးဖြစ်.
ရေရှည်မှာမှာတော့ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်နီယာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေ။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူအတော်လေး heck စေသည်။ အခြိနျမှနျမှ သငျသညျအင်ဂျင်နီယာအနေအထားကိုရှာတှေ့နိုငျ လူမှုမီဒီယာကိုကျော်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိအကောင်းဆုံးအင်ဂျင်နီယာဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများသည်အများအပြားရာထူးများပါဝင်သည်။ မှတ်ချက်ချခဲ့ပြီးအဖြစ် အရှေ့အလယ်ပိုင်း၌သင်တို့ကိုနေရာလွတ်ရှာတှေ့နိုငျ အရပ်သားနှင့်အစိုးရရာထူးများအတွက်။ အတူတူစက်မှုနေရာလွတ်, ထိုမှတပါးလျှပ်စစ်နှင့်ဇီဝနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာများအလုပ်အကိုင်နှင့်အတူ။
သငျသညျအင်ဂျင်နီယာစီမံကိန်းများတွင်အမြင့်ဆုံးလစာလုပ်ခကိုရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်။ နှစ်လိုဖွယ်အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုအဘို့သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ထလော့။ အတှေ့အကွုံ 10 နှစ်ပေါင်းအတူအင်ဂျင်နီယာများ ယူအေအီးအတွက်ထိတွေ့သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းဆင်းသက်ဖို့ကြိုးစားပါ, အစုလိုက်အပြုံလိုက်အကူးအပြောင်းအင်ဂျင်နီယာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစနစ်များ, နှင့်အခြားသောလက်ပေါ်, လေဆိပ်ကိုလည်းမြင့်မားကြောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက် rated နေကြသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အများစုအင်ဂျင်နီယာ ပင်ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို။ ဖြည်းဖြည်းချင်းဒူဘိုင်းစက်မှု City နှင့် Dubiotech တည်ရှိသောဖြစ်လာသည်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သော Google သို့မဟုတ် LinkedIn တို့ကဲ့သို့သောအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု. ဒူဘိုင်းစက်မှုဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီများနှင့်အဘူဒါဘီကုမ္ပဏီများသည်လက်လှမ်းမှီနိုင်သောအဆုံးရန်။ ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်နီယာအလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အကြောင်း, ပြောဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းအလုပ်တွင်ကျယ်စွာလျှောက်ထားခြင်းနှင့်လူအင်အားအကူအညီတောင်းစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများရောက်ရှိ.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျလေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာအတွေ့အကြုံရှိပါကသင်၏လက်နှင့်စစ်ဆေးမှုများမြင့်တက် အင်္ဂါဂြိုဟ်မစ်ရှင် Emirates ။
အစိုးရအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်များအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း။ သငျသညျအထဲကထောက်ပြပြည်ပရှိအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးဖြစ်ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အလုပ်အပြောင်းအလဲရှာနေစကားပြောမည်သူမဆိုအမျက်ထွက်စေသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထမပေးပါဘူး။ သာပုဂ္ဂလိကသူတွေကိုရဖို့အစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဆင့်မြင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပေါ်မှာတက်စစ်ဆေးပါ။ အစိုးရအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအချိန်ကြာပါတယ်။ အချို့သော အလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်း 6-8 လအထိယူပြီး.
အစိုးရအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအတွက်စော်ဘွားအတွက်အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, ကျနော်တို့အစိုးရကုမ္ပဏီများနှင့်သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေရေးနှင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဒီအတွက်ကြောင့်, ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ သငျသညျဆင်းသက်ပုံကိုသိတယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက်အိပ်မက်အစိုးရအလုပ်ပါ။
ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်သူရာခိုင်နှုန်း 80 ထက်ပို။ အစိုးရကုမ္ပဏီများအတွက်စတင်အလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်။ ဤအချက်များပေးထားကျနော်တို့ယူအေအီးအတွက်စစ်တမ်းတစ်ခုစေပြီ။ ငါတို့သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံကိုရှိခြင်းကြောင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သငျသညျစီမံခန့်ခွဲမှုဆင်းသက်ကူညီပေးပါမည် အစိုးရ-operated ကုမ္ပဏီများသည်အခွင့်အလမ်းများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနစီမံကိန်းကိုထုတ်ဖော် ကျွမ်းကျင်သူများတစ်ဦး projected အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေပါသည် အစိုးရကုမ္ပဏီများကပါ။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက် No.1 option ကိုအမျှ။
အထက်ပြထားတဲ့အတိုင်းကြီးမားတဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူသငျသညျထားရှိခံရဖို့ထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိသည်။ ထိုအများ၏အများစု ဒေသခံအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုး။ သူတို့ပြီးသားသူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်မှန်းချက်ထားပြီဟု။ ရိုးရှင်းစွာအအစိုးရ၏အလုပ်အကိုင်စတင်ရန်။ အကောင်းဆုံးကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတွင်ကျယ်စွာတစ်ခုမှာသင်လုပ်နိုင်သည် Bayt ဖြစ်ပါသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလားအလာတှေ့ရ.
စော်ဘွားဂျော့ဘ်များအတွက်မကြာသေးမီကလေ့လာမှု။ အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှင်၏ရာခိုင်နှုန်းကြောင်း 45 ပြသခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်, စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်တစ်ဦး၏တစ်နှစ်အတွက်ပိုမိုမြင့်မားနေရာချထားမြင့်တက်ဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ် ပင်ကိုအခြား GCC နိုင်ငံများရှိအချိန်.
Emirates အလုပ်နှင့်ဘဏ္.ာရေး ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းများ
စော်ဘွားဂျော့ရှာဖွေနေအတော်များများပြည်တော်ပြန်။ အတွက်ပုဂ္ဂလိကဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍမှာရေရှည်အလုပ်အတွက် ယူအေအီးအကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်။ ပွိုင့်ကိုမကြာခဏကြီးမားသောငွေရေးကြေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းများမှာအလုပ်အကိုင်အဘို့အသတိမမူ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သေးငယ်သည့်ကုမ္ပဏီများလည်းရှိပါသည်အများအပြားနေရာလွတ်ရှိပါတယ်။ လူတိုင်းမအိပ်မက်ရှိတယ် အစိုးရကဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍများ၌လုပ်ကိုင်ဖို့။ ဒါကြောင့်အခြားသူများထံမှကွဲပြားခြားနားဖြစ်နှင့်သေးငယ်ဘဏ္ဍာရေးကုမ္ပဏီများအတွက်ရှာပါ။ ဥပမာအားဖြင့် FX လဲလှယ်ကုမ္ပဏီများနှင့်ပေါင်ဆိုင်များသည်။ သူတို့ကအသစ်တစ်ခုကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်နိုင်ရန်အလွန်ကောင်းသောနေရာများဖြစ်ကြသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်ထဲမှာ extensions တွေကိုအတွေ့အကြုံကိုရှိပါက။ အတော်ကြာဘဏ္ဍာရေးအလုပ်ရှိပါတယ် ယူအေအီးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ရရှိနိုင်ပါအခွင့်အလမ်းများ။ သင်တို့သည်လည်းအခြေခံအချို့ကိုကြည့်ကြသင့်ပါတယ်။ အဖြစ်မှန်ခုနှစ်တွင်ဘဏ္ဍာရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုလည်း GCC နိုင်ငံများ၌ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ရရှိနိုင် options များဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီသာဖြစ်ပါတယ်။
ဘဏ္ဍာရေးအတွက်နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအလုပ်အကိုင်များအတွက်အသုံးချခံရဖို့ထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။ သင့်ရဲ့အားထုတ်မှုတွေဟာရိုးရှင်းစွာအဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လက်ျာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလေးလည်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ထိုအခါရေရှည်မှာ, သင်ကျိန်းသေစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးပြောင်းရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဘဏ္ဍာရေးဘဏ်များအတွက်နှင့်လက်ျာလူတစ်ဦးများအတွက်ကောင်းစွာပေးဆောင်ကော်ပိုရေးရှင်းသည်။
ဂရပ်ဖစ် start ကိုဘယ်လို ပုံစံ ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
မှတ်ချက်ချခဲ့ပြီးအဖြစ် စော်ဘွားအလုပ်အကိုင်များလျှင်သင်ဒီမျိုးများအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုအချို့အစုံလိုအပ်ပါတယ်။ လတ်ဆတ်သောဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာကိုစတင်ရန် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, သင်စွမ်းရည်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုအပေါ်စိတ်ပြည်နယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်။ ထိုသို့ထိပ်ဆုံးတွင်, သငျသညျကော်ပိုရိတ်အမှတ်တံဆိပ်လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အတူကော်ပိုရိတ်ယဉ်ကျေးမှုကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတစ်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာအဖြစ်, သင်အရည်အသွေးမြင့်စီမံကိန်းများစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, သင်မန်နေဂျာများအတွက်အမြင်အယူအဆများကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ နှင့်သင်တန်း၏အဘို့ နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးပိုင်ရှင်များနှင့်၎င်းတို့၏ကုမ္ပဏီများသည်။ အဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းအခြေစိုက်ကော်ပိုရေးရှင်းအများစုဟာ။ နေသမျှကာလပတ်လုံးအချို့ကိုသင်စီမံကိန်းကိုအတွေးအခေါ်များရှိသည်အဖြစ်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင်တို့ကိုလူတွေလာအောင်နှိုးဆွကြောင်းစိတ်ကူးများဖန်တီးရန်လိုအပ်နေတဲ့ဒီဇိုင်နာအဖြစ်စကားပြော။ အဖြစ်ရလဒ်သို့မဟုတ်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်။
သငျသညျကို Adobe Photoshop မှာကျွမ်းကျင်သူတစ်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ Illustrator အစီအစဉ်များ, အခြားသက်ဆိုင်ရာ applications များနှင့်အတူပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပဒီဇိုင်းဘာမျှမပြောပါရန်။ ဒါ့အပြင်ဒီဇိုင်နာကိုယ်တော်တိုင်အားဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဘူး။ သင် ... ဖြစ်လိမ့်မည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး telesales အသင်းများကိုထောက်ပံ့ အမျိုးမျိုးသောလူမှုရေးမီဒီယာစီမံကိန်းများကိုပေါ်မှာ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျလိုအပျသောလိုအပ်ချက်များကို။ Identity စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာအဖြစ်သငျသညျလိုအပ်ပါတယ်။ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းအတွက်မာစတာဒီဂရီ။ တွင် အရှေ့အလယ်ပိုင်း, သူတို့ကယူအေအီးကနေဒေသခံတက္ကသိုလ်ဒီပလိုမာပိုနှစ်သက်.
ဒီအနေအထားအဘို့, အပြင်, သငျသညျအခြေခံဆက်သွယ်ရေးဒီဇိုင်းနှင့်အတူအမြင်အာရုံဒီဇိုင်းအတွေ့အကြုံကိုလိုအပ်ပါတယ်။ သင်တို့အဘို့အညီအမျှအရေးကြီးသောဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်သူအသိပညာရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ဆော့ဖျဝဲ ထိုကဲ့သို့သောကို Photoshop နှင့် InDesign အစီအစဉ်ကိုထိုမှတပါး Illustrator, Sketch, များပြားပိုပြီးအဖြစ်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု အရှေ့အလယ်ပိုင်း၌တည်၏။ ဤသည်မှာမှန်ကောင်းမှန်နိုင်သော်လည်းဤအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းသည်ခန့်မှန်းမှုအများဆုံးအလုပ်ဖြစ်သည်။ မတူတာကတော့, ဒူဘိုင်းကုန်စည်ပြပွဲ 2020 အနိုင်ရရှိခဲ့ကတည်းကအခွင့်အလမ်းများ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကြီးထွားလာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကဏ္ဍများ၌စော်ဘွားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအထူးကုတက်ထံမှအကြီးတန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးဖြစ်နိုင် သငျသညျအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအမဲလိုက်အဘို့အဘူဒါဘီသွားရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါမှာ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များတစ်ခုမှာ Angel.co ဖြစ်ပါသည်
စျေးကွက်အလုပ်အကိုင်များရရှိရန်အတော်လေးလွယ်ကူပါတယ်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူ, သငျသညျနီးပါးမည်သည့်ကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ စျေးကွက်မသာကြော်ငြာကုမ္ပဏီများသည်၌တည်ရှိ၏ကြောင့်ဖြစ်သည်။ တိုင်းကြီးမားတဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြည်တွင်းရေးဌာနရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်တစ်ဦးရှိနိုင်ပါသည် ပေါ်ရွှေ့ခြင်းနှင့်ရရှိနိုင်နေရာလွတ်လျှောက်ထားထို့နောက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းကုမ္ပဏီများသည်ကိုကြည့်။ Marketing ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလူမှုမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရောင်းအားပါဝငျသညျ။ သငျသညျအလုံအလောက်ကျွမ်းကျင်မှုရှိပါကကြောင့်အခြားသောလမ်းထားရန်, သင်ကောင်းတစ်ဦးအခန်းအလွတ်ရနိုင်။
စျေးကွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကောင်းသော-ပေးဆောင်အလုပ်ရှင်များ၏ဥပမာတစ်ခုမှာ SEO ဆိုသည်မှာကုမ္ပဏီများမှဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမျိုးအစား အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်ကုမ္ပဏီများ။ ဒီအလုပ်အကိုင်များများအတွက်နောက်ထပ်အဓိကသော့ချက်အမှတ်မြှင့်တင်ရေးဖွဲ့စည်းပုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကို run မယ်ဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်သင်ရုံလအနည်းငယ်အတွင်းမှာရာထူးတိုးနိုင်ပါတယ် မြင့်မားသောအဆင့်မှာစျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများ။ သင်တဦးတည်းရှိလိုပါလျှင်အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျအနာဂတျမှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီစတင်နိုင်ပါသည်။
ဒီတော့စော်ဘွားဂျော့စျေးကွက်များအတွက်အဓိကသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်သင်အများကြီးပညာရေးမလိုအပ်ပါဘူး။ သင်လိုအပ်အားလုံး ရှိသည်ဖို့သင့်ကိုယ်ပိုင်စမတ်စိတ်ကူးများဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအသစ်ကိုအလုပ်ရှင်စဉ်ငွေသားစီးဆင်းမှုနှင့်ရွယ်မျှော်လင့်လို့ပဲ။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင်ကျောင်းတွင်လေ့လာသင်ယူမအဘယ်အရာကို။
ကိုယ်ပိုင် ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးအစောင့်အလုပ်များ အစာရှောင်ခြင်း mode မှာရရှိနိုင်ပါ!
ဘုံမှာဖော်ပြထားတဲ့လူပေါင်းအဖြစ်တယောက်နဲ့တူပါတယ်အလုပ်။ ရိုးရှင်းစွာအအခြားသူများကိုကူညီခြင်းပါဝင်ပတ်သက်နေနှင့်လုံခြုံသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်လော့။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်ခြမ်းတွင်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကောင်းစွာဝင်ငွေနှင့်အတူ။ သို့သော်တဦး သငျသညျအနိမ့်အရည်အချင်းများနှင့်အတူသရုပ်ဆောင်နိုင်သောအမြန်ဆုံးအလုပ်အကိုင်များ လုံခြုံရေးအစောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက်အခြားတစ်ဖက်တွင်, တကအလွန်ကောင်းသောအနေအထားဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ယူအေအီးအတွက်ရာဇဝတ်မှုနှုန်းကို 0% ဖြစ်ပါသည် ဒါကြောင့်အပေါ်ရုံအခြေစိုက်စခန်းတာဝန်လုပ်ဖို့လုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ကိုခုနှစ်တွင်, သင်တန်း, သငျသညျတာဝန်များကိုစောင့်၏ဤမျှလောက်များစွာသောအမျိုးအစားများကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါ။ သို့သော်ဒူဘိုင်းစီးတီးအတွက်ငှားရမ်းနေသောကြွယ်ဝသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမှုဆောင်အရာရှိရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရတဲ့သဘာဝကျပါတယ်။ ဤသူသည်သင်တို့ကိုပြုလိုကဘာလဲလျှင်မှတပါးစောင့်ရှောက်ခြင်းအခြားသူတွေကိုကူညီပေးခြင်း ?. လုံခြုံရေးအဘို့အ Apply အလုပ် site ကိုမှာမရရှိနိုင်ရာထူး။ ဒါပေမယ့်သင်ကတာဝန်အချို့ကိုကျောင်းကလေးတွေနှင့်အတူသွားကြသည်ကစိတ်၌စောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Going နှင့်သင့်အလုပ်ရှင်စျေးဝယ်သောအခါစောင့်ဆိုင်းနေ။ အချည်းနှီးစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ကားဒါမှမဟုတ်ဗင်မှာမရေမတွက်နိုင်သောနာရီဖြုန်း။
သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အလှတရားရှိပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူတန်းစား, ထိုကဲ့သို့သော BMWi7 နဲ့ Mercedes SLR အဖြစ်ကားများအားကစားနှင့်ကြော့ရှင်းအမျိုးအစားကိုသွားရောက်ကာ။ ပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးပဲ သငျသညျပါဝင်ပတ်သက်မည်ကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားပြည့်စုံ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်တို့၏အလုပ်ရှင်များဆိုက်ပရပ်စ်မှသွားလာလျှင်သင်သူ့ကိုနှင့်အတူပျံသန်းပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျသွားရောက်ပါလိမ့်မယ် ထိုကဲ့သို့သောတောင်အာဖရိကအဖြစ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်အံ့သြဖွယ်သောနေရာများ နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပိုက်ဆံပါစေ။ ဒါကြောင့်ဒီတာဝန်၏ဆိုးကျိုးနှင့်လက္ခဏာထွက်ရှာရန်သင့်အားမှတက်ကယ့်ကိုပါပဲ။
စော်ဘွားအလုပ်အကိုင်များများအတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးစိတ်ညစ်စရာတာဝန်။ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေဖို့ကိုဘယ်လို။ အဖြေကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး !. နေ့တိုင်းအသစ်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုး updated နေရာလွတ်အဘို့မှာ google သုတေသနပြု။ သငျသညျနေ့စဉ်သုတေသနပြုသူတစ်ဦးတည်းသာမဟုတ်။ အလုပ်တစ်ခုများအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာသို့မဟုတ်အင်တာနက် website ကိုတွင်ကျယ်စွာ။ ကြောင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းစနစ်တစ်ခုမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ site ပေါ်တွင်နေရာလွတ်သတိပေးချက်များထ setting ဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်အလွတ်ယူခံရဖို့မရရှိနိုင်တက်လာတဲ့အခါ။ သငျသညျသစ်ကိုစော်ဘွားဂျော့ဘ်များအတွက်သင့်အီးမေးလ်အတွက်အကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်သွားနှင့်အလုပ်အကိုင်အတွင်ကျယ်စွာရှာပါ။ သူကားအဘယ်သူနိုင် အကူအညီသင်သည်အလုပ်သတိပေးချက်များကို set up သင်မှန်ကန်တဲ့သူတွေကိုရွေးယူဘူးသေချာပါစေ။
ယခုနှစ်အစပိုင်းတွင်လည်းမရှိဒါကြောင့်ဒူဘိုင်းအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အလုပ်အကိုင်များ 2018 ရှိပါတယ်။ ထိုသို့ပြုခြင်းနှင့်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဂျော့ဘ်ကိုရှာတဲ့အချိန်နေဆဲရှိပါသည်။ အဆိုပါများအတွက်အကောင်းဆုံး နောက်ဆုံးပေါ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်ပေါ်တယ်က်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်ခွဲခြားအလုပ်အမဲလိုက်အတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်ကြောင်းထပ်ပြောသည်။ အဆိုပါသေးငယ်သည့်ကုမ္ပဏီများစျေးကြီးကြော်ငြာပေါ်သုံးဖြုန်းမယ့်ဘတ်ဂျက်မရှိဘူး။ ဒါကြောင့်သူတို့ကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အပို့စ်တင်နေကြသည်ကိုဒေသခံကြော်ငြာကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပေးထားပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာကြော်ငြာကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံးပေါ်အလုပ်အကိုင်များရရှိရန်။ ကဲ့သို့သောစာပိုဒ်တိုများများအတွက် Google အလားတူက်ဘ်ဆိုက်များကိုလည်းရှာပါ ဒူဘိုင်း 2020 အတွက်ဂျော့ဘ်။ လည်း 2018 နောက်ဆုံးပေါ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများအတွက်ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်ကြည့်ရှိသည်။ သည်အခြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူထို့နောက်ပင်စမတ်ဖြစ်နှင့် LinkedIn နှင့် Facebook ပေါ်တွင်ကြည့်ရှိသည်ဖို့ကြိုးစားပါ။ ဒေသခံစုဆောင်းမှု Abdus ဒါဘီအတွက်လိုအပ်ပါတယ်အကြီးအကျယ်သေးငယ်တဲ့ကုမ္ပဏီရှိပါတယ်။ ထိုပို့စ်အပေါငျးတို့သ ဒေသခံအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများအတွက် 2020 အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှု.
ယူအေအီးအတွက်ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်နေဆဲကုန်စည်ပြပွဲ 2020 များအတွက်ကြီးထွားလာနေပါတယ်။ 1999 ကတည်းကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ကြီးမားသောအတိုင်းအတာစီမံခန့်ခွဲအရွယ်ရောက်ဒူဘိုင်းစီးတီးရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုသင်အငယ်တန်းစာရင်းကိုင်အဖြစ်စတင်နိုင်ပါသည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဒီလိုမျိုးရဖို့။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သင်တို့နှင့်အတူအဖွင့်အတိုင်းလိုက်နာရန်လိုအပ်ကြောင်းအနည်းငယ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်များရှိပါသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သငျသညျအလုပ်မလုပ်စတင်နိုင်ပါသည် ကြီးမားတဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းသည်။ တနည်းအားဖြင့်အကြီးတန်းဘဏ္ဍာရေးမန်နေဂျာ၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်အဘူဒါဘီတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်စတင်ပါ။ ဤအကြောင်းကြောင့်, သင်သည်သင်၏စီမံကိန်းအတွက်တာဝန်ခံရုံးရနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ထိုမှတပါး, အကောင့်တစ်ခုမန်နေဂျာသင် client များအတွက်ဇိမ်ခံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစုစုကိုသြဒိနိတ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အတူတူ client ကိုဝန်ဆောင်မှုအကြွေးမြီအတူ။ ယင်းအသီးအသီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာအဆင့်မြင့်အပေါ်ကိုပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သာတာဝန်ငွေတောင်းခံလွှာများကိုပြင်ဆင်နေဒါပေမယ့်လည်းငွေပေးချေမှုအတူတက်ကိုလိုက်နာပါလိမ့်မည်။ နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဈေးကွက်ဒါကြောင့်ဘဏ္ဍာရေးငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ခွင့်ပြုချက်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ယေဘုယျအားဖြင့်လက်ရှိတာဝန်ခံ၌နေသောရုံးမန်နေဂျာထံမှစကားပြော။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဘဏ္ဍာငွေကြေးကုန်ကျမတိုင်မီထွက်အလုပ်လုပ်ထလာပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်အားလုံးအဘူဒါဘီ Commercial Bank ကိုငါသိ၏။ ဒါ့အပြင် Barclays ဘဏ် Plc အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ဥရောပတိုက်တွင်အဘို့အလုပ်ကိုင်ဖို့။ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဘဏ်နိုင်ငံတကာနှင့်အတူထို့အပြင်ဒူဘိုင်းအစ္စလာမ်မစ်ဘဏ်ကိုစစ်ဆေးရကျိုးနပ်သည်အခြား2ကုမ္ပဏီများသည်။ အတူတူဒူဘိုင်းအမျိုးသားဘဏ်နှင့်အတူအဘူဒါဘီနှင့်အဆုံး၌အမျိုးသားဘဏ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သင်၏အအိပ်မက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်နိုင်ရန်အံ့သြဖွယ်သောနေရာများဖြစ်ကြသည်။
၏သင်တန်းနေ့ရက်ကိုစာရင်းကိုင်အလုပ်အကိုင်များမှတစ်နေ့လျှင်-အဆုံးသတ်တာပါ။ တာဝန်ပေးစေခြင်းငှါအခြားမည်သည့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများနှင့်တာဝန်များထမ်းဆောင်သည်ဤအကြောင်းပြချက်သည်။ အခြိနျမှနျမှတစ်နေ့လျှင် 12h ကျော်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူတို့အားအခြေအနေတွေအောက်မှာ။ ဘဏ္ဍာရေးဌာနကို run ဖို့ဘဏ္ဍာရေးမန်နေဂျာနှင့်ရုံးမန်နေဂျာကိုကူညီပေးခြင်း။ အကျိုးဆက်အသစ်သောအစီရင်ခံစာများများကိုမရေမတွက်နိုင်အောင်အစီရင်ခံစာများထုတ်လုပ်။ ဒီအတွက်ကြောင့်, သင်ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍအတွင်းစတင်အလုပ်လုပ်သင့်ကြောင်းအနည်းငယ်ကုမ္ပဏီများမှကြည့်ပြီ.
ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်သင့်လျော်သော file system ထူထောင်ရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ထို့အပြင် client ကိုငွေတောင်းခံလွှာများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းငွေတောင်းခံလွှာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်။ ရိုးရှင်းသေးသုံးငွေဥပဒေကြမ်းများကိုစစ်ဆေးခြင်းဘဏ်များနှင့်ဆနျ့ကငျြဘစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာပေးစာယူ၌တည်၏။ ဒါ့အပြင်နှိုင်းယှဉ်ဘဏ်ငွေပေးချေမှု, အကြွေးကတ်များနှင့်များစွာသောအတူလုပ်ကိုင် 2020 ပိုမိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း opportunites။ လစဉ်ငွေသားစီးဆင်းမှု၏တူညီသောလက္ခဏာသက်သေပြင်ဆင်မှုအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ဤစကားမှန်သည်အခြားဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာများဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လည်းပြုမိရန်လိုအပ်ပါသည်နေကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆို။ ထိုလူအပေါင်းတို့သည်သက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုများအတွက်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်လိုင်းမန်နေဂျာ၏ဒါရိုက်တာ။ အဆိုပါ ကျိန်းသေစော်ဘွားအလုပ်အကိုင်များ ရရန်လွယ်ကူမဖြစ်ပေမယ့်တွေ့ရှိချက်မှ wort များမှာသင့်ပါတယ်။
သင်အွန်လိုင်းအလုပ်ပျဉ်ပြားပေါ်တွင်ရနိုင်စော်ဘွားအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်လအတွက် 25,000 အွန်လိုင်းနေရာလွတ်ကိုကျော်ဒူဘိုင်းမြို့ရာပူဇော်သက္ကာဘို့။ ဒါကြောင့်ဘာပဲသင်ကျိန်းသေသငျသညျရှာတှေ့နိုငျရှာချင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းအလုပ်အကိုင်များကွဲပြားခြားနားကြသည် စံအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနေရာချထားရာမှ။ အဘူဒါဘီအတွက်ရှင်းလင်းဖို့လက်ရှိသူတို့ရဲ့အဖွဲ့ကို join ဖို့ပြောင်းလဲနေသောအွန်လိုင်းစတိုး Manager ကိုအဲဒီမှာရှာဖွေနေပါသည်။
ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, အွန်လိုင်းဖြစ်မြောက်ရေးအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုကိုခံရကြ၏။ ဤအကြောင်းကြောင့်, KPIs အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များနှင့်အတူအားလုံးအချိန်များတွင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းအာမခံပါသည်။ သငျသညျနီးကပ်စွာအဘူဒါဘီအတွက်အီးကောမတ်စစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်မှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင် အွန်လိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲ နှင့်အွန်လိုင်းစတိုးကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး။ အဘူဒါဘီတွင်အွန်လိုင်းအလုပ်အကိုင်များအတွက်အရေးကြီးဖြစ်ကြသည်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, supporting အိုင်တီအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ကြောင်းကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အရောင်းအဖွဲ့ကိုသင်တို့နှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ပတ်သတ်ပြီးစာရင်းပြုနိုင်ရန် စော်ဘွားအလုပ်အကိုင်များအတွင်းဝယ်လိုအား အစဉ်အမြဲပွင့်လင်းကြသည်။ သငျသညျဒါ့အပြင်သင်အိုင်တီအွန်လိုင်းအထူးကုနိုင်ပါတယ်အွန်လိုင်းစျေးဆိုင်, SEO ဆိုသည်မှာကုမ္ပဏီများ, အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတိုင်ပင်ခံတွင်အွန်လိုင်းနေရာလွတ်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ သငျသညျဆုချီးနညျးတူအွန်လိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီ၌သင်တို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုများနှင့်အောင်မြင်မှုများအတွက်.
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သငျသညျကနျြးမာရေးအာမခံအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတူယှဉ်ပြိုင်လစာနှင့်အတူအလွန်ကောင်းသောဆုကြေးငွေကိုမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျစော်ဘွားအလုပ်အကိုင်များခံစားရသော်လည်းသင်တို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စကအွန်လိုင်းအောင်မြင်သောကုမ္ပဏီ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာဖို့ကြာသောအရာကို။ အဖြစ်မှန်တစ်ခု updated CV ကိုအတူအများအပြားနေရာလွတ်လျှောက်ထားကျေးဇူးပြုပြီး ယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်.
ဒူဘိုင်းရှိဒေတာ entry ကိုအလုပ်အကိုင်များရှာခြင်းနှင့်ရွေးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ရှာဖွေခြင်းနှင့် entry ကိုတာဝန်များကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနေရာလွတ်ကိုရွေးချယ်ခြင်း။ ကြောင်းလွယ်ကူသောဖြစ်ကြသည်မဟုတ်, အခြို့ Research အလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီများနှင့်အတူသရုပ်ဆောင်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း။ ကျိန်းသေ, ငါတို့သည်သင်တို့ယူအေအီးအတွက်ဒေတာ entry ကိုအလုပ်ဆင်းသက်ကူညီပေးနေ။ နေရာလွတ်၏ကြင်နာစပ်လျဉ်းပြန်လုပ်ရန်။ ကျနော်တို့ယူအေအီးကုမ္ပဏီများမှအတွက်အတော်လေးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြင်လျှင်။ အဘူဒါဘီ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ရှာ အတွေ့အကြုံရှိပါရမီအမြိုးသမီးတပြည်တော်ပြန်များအတွက်။ အကောင်းဆုံးများထဲမှ, သင်တန်း, ဒေတာ entry ကိုအတှေ့အကွုံရှိပြီးပြီးသားယူအေအီးအတွက်စည်းရုံးရေးမှူးအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်။
သငျသညျစာရိုက်တဲ့သော့ချက်အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်အခါအခြားသောလမ်းထားရန်, တိကျမှန်ကန်မှုသတင်းအချက်အလက်အတည်ပြုရန်။ စော်ဘွားအလုပ်အကိုင်များ, သင်အစိုးရကဦးစားပေးအစီအစဉ်အရသိရသည်သတင်းအချက်အလက် sort ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကအဓိကအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုပြောကွန်ပျူတာ entry ကိုများအတွက်ရင်းမြစ်ဒေတာများကို ပြင်ဆင်. ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားတာဝန်များကို data တွေကိုအစီအစဉ်ကိုနည်းစနစ်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအသစ်စီမံကိန်းများအတွက်လုပျထုံးလုပျနညျး.
မကြာခဏသတိမမူအမှတ်ပြည်တွင်းရေးအစီရင်ခံစာများထုတ်လုပ်နေသည်။ ဤသည်၌ပိုပြီးပါဝင်ပတ်သက်ရှိပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသောနေရာများတွင်အတွက်အနုတ်လက္ခဏာဘက်အလုပ်တွင်နှင့်ဤအလုပ်အဘို့အနာရီအကြာတွင် backup လုပ်ထားစစ်ဆင်ရေးလုပ်ဆောင်လိုအပ်ပါသည်။ သငျသညျဒေတာ entry ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာတှေ့နိုငျတစ်ခုတည်းသောရာအရပျကလူ သိ. အားဖြင့်ဖြစ်တယ် စီမံကိန်းအတွင်းပါဝင်ပတ်သက်။ ရုံးထဲမှာဥပမာအားအစိုးရကိုယ်စားလှယ်များသည်။ သို့မဟုတ်ပင်သည်အခြားဒေတာဘေ့စစီမံကိန်းများအတွက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသူအထူးသဖြင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများအတွက်။
ယူအေအီးအတွက်ဥပမာသူနာပြုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသေချာဘို့ဒီဂရီလိုအပ်ပါသည်။ ထောက်ပြဖို့ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေနေ။ အဆိုပါသူနာပြုဒူဘိုင်းတွင်ကောင်းသောအမှုကိုစိတ်ကူးဖြစ်သကဲ့သို့။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျအတှေ့အကွုံရှိပါက။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဝန်ထမ်းသူနာပြုနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ-ခွဲစိတ်တာဝန်များကိုစကားပြောခဲယဉ်းဖြစ်ကြသည်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, သင်ဒူဘိုင်းဆေးရုံများအတွက်အနေအထားကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။
နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ မှတ်ပုံတင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆေးဘက် & ခွဲစိတ်သူနာပြုအဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ပင်ပြည်ပမှပြည်တော်ပြန်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါဖြစ်လာသည်။ တခြားသူတွေကိုတင်ဆောင်ပါဝင်သောဤသည်အလုပ်အကိုင်များ။ ဒီလက်ငင်းသူနာပြု at များအတွက်တိုက်ရိုက်လူနာစောင့်ရှောက်မှုပေးသည် ဒူဘိုင်း ဆေးရုံများ။ ရှင်းမှ, ဒီခက်ခဲတာဝန်များကိုဤမျှလောက်များစွာသောပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုသြဒိနိတ်။ အာရပ်ဧညျ့နှင့်သူနာပြုန်ဆောင်မှုများ၏သိပ္ပံနည်းကျလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသုံးပြီးလူနာစောင့်ရှောက်မှု-related လှုပ်ရှားမှုများ၏ဗဟို၌တည်၏။
ဤတွင်ထိုသူနာပြုစောင့်ရှောက်မှုကလေးအားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ခံ, အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများလူဦးရေ၌တည်၏။ စော်ဘွားအလုပ်အကိုင်များသူနာပြုမန်နေဂျင်းကိုင်တွယ်အသစ်ကလူနာများ၏တာဝန်ဝတ္တရား understandings အဖြစ်။ ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း အလုပ်လုပ်ကိုင် လိုအပ်သည့်အခါဆေးရုံအတွေ့အကြုံကိုအတွင်းဆေးဝါးကုသမှုဒေသများပေါ်မှာ။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရှာဖွေနေသည့်နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားတိုင်း။ ကုန်ကျစရိတ် ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင် ငှားရမ်းခပေးချေမှု၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများနှင့်အခြားအရာများအတွက်ကြီးမားသည်။ ဒါကအားလုံးမေးခွန်းတစ်ခုကိုမှလာပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူများအစာရှောင်ခြင်းအဖြစ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ဖို့ကိုဘယ်လို လုံလောက်သော?။ ရုတ်တရက်အားလုံးပေမယ့်တစ်ဦးတည်းသာအဖြေလည်းမရှိ။ သငျသညျဖြစ်နိုင်သည်ရှာတှေ့နိုငျသောအရပ်ဌာနနှင့်အီးမေးလ်ကသင်၏အလုပ်အကိုင်အလျှောက်လွှာပေးပို့ခြင်း။
ယူအေအီးအခြားပြည်တော်ပြန်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူအချို့သောအတွေ့အကြုံကိုရှိသည်။ သငျသညျအကွံဉာဏျတောငျးမကြောက်သင့်ပါတယ်။ သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အကောင်းဆုံးအရေးပေါ်တာဝန်မီးဖိုချောင်အထမ်းသမားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမျိုးအစား ပစ္စုပ္ပန်အချိန်ကတာဝန်နေဆဲစီမံခန့်ခွဲမှုဖို့အခက်ခဲဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်အီး။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များနှင့်လက်စွဲစာအုပ်တာဝန်များကိုကိုရှာဖွေစူပါလွယ်ကူပါတယ်။ ဒေသခံကြော်ငြာများအတွက်အလွန်အခြေခံအလုပ်အကိုင်များရှာရန်နှင့်အလုပ်ရှင်များမှခေါ်ပါ။ သငျသညျအတော်လေးမြန်ဆန်စွာအိပ်မက်၏မြို့အတွက်အလုပ်အကိုင်အကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်အဘယ်အရာကိုသင်တို့အဘို့ရှာကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်သင်အမြဲပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တကယ်သိပ်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ နှင့် ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း start ရုံကြိုးစားပြီး နေပါစေဤသည်၌ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကိုခံရလတံ့သောအရာကိုကုန်ကျစရိတ်။
ဘယ်လိုရှာရမလဲ စော်ဘွား Group မှ Careers လက်ရှိအချိန်မှာလား
အိုကေ၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Emirates Group Careers ကိုစာရင်းထဲသို့ထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်အလုပ်လုပ် ရေရှည်တွင်သင်သည်သင်၏အနာဂတ်ကိုလုံခြုံစေလိုသည့်အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ ယူအေအီးအမျိုးသားနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုများ။ အမှုဆောင်အရာရှိငှားရမ်းအဆိုပါစော်ဘွားပြည်တော်ပြန်နိုင်ငံသားများစုဆောင်းရန်အလွန်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားရှိပါသည် အာရှနှင့် GCC နိုင်ငံများမှ။ အတူစော်ဘွားများပြည်ထောင်စု 2020 အတွက်ကုန်စည်ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များများအတွက်ကြီးထွားကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုစတင်ရန်။
နောက်ကွယ်မှာ လေဆိပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အသစ်သောစော်ဘွားအလုပ်အကိုင်များတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ ငှားရမ်းမန်နေဂျာအမြဲလျှို့ဝှက်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသစ္စာရှိမှုအတှကျအလုပျသမားမြားတိုက်တွန်းပါသည်။ nongovernment ကုမ္ပဏီများသည်စော်ဘွားများအုပ်စုဆန့်ကျင်ဘက်။ အတိအကျ အောင်မြင်မှုအဘို့အကတိသစ္စာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးတက်သည် running။ ဒီအခြမ်းတွင်မိမိတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း website တွင်ကြည့်ပါနှင့်သင့် updated ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပါသည်။
သင်သွားမီ, သငျသညျမှာကွညျ့ရှိသည်ဖို့လိုအပ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်လိုက်ထံမှအရှေ့အလယ်ပိုင်းဆောင်းပါး။ သင်အလွယ်တကူယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အအံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်များအုပ်စုများအတွက်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ရန်သင့် CV ကို add နိုင်ပါတယ် ပင်လယ်ကွေ့အတွင်းရှိမြို့အိပ်မက်မက်။ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေကြသူကတခြားအလုပ်ရှာဖွေသူများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ။ သို့ပြုလျှင်သင်၏ updated CV ကိုအသစ်စုဆောင်းရေးမန်နေဂျာထောက်ပြတာပါ။
အောက်ပါနှစ်များတွင်စျေးကွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မှပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် မိုဘိုင်းဖုန်းစုဆောင်းမှု သင်တစ်ဦးအလုပ်ရရန်သင့် android ဖုန်းကိုသုံးနိုင်သည်။
တစ်ဦးကိုရှာပါ ဒူဘိုင်းယောဘ? အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုသင်အိပ်မက်အလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ရိုးရှင်းစွာကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload နှင့်တစ်ဦးကိုစတင်ရန် အသစ်စော်ဘွားအလုပ်ရှာဖွေရေး ဒူဘိုင်း!